ကိုယ်လုံး အလှလေးတွေ အထင်းသားပေါ် လွင်နေတဲ့ အကိတ်မလေး မေပန်းချီ ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယိုလေး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကိုယ်လုံး အလှလေးတွေ အထင်းသားပေါ် လွင်နေတဲ့ အကိတ်မလေး မေပန်းချီ ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယိုလေး
ကိုယ်လုံး အလှလေးတွေ အထင်းသားပေါ် လွင်နေတဲ့ အကိတ်မလေး မေပန်းချီ ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယိုလေး
By Ga MonePosted on January 21, 2021 January 21, 2021
ဒီနေ့ မှာလည်း အမိုက် စား ခန္တာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ပေါ်လွင်နေ တဲ့ ဖက်ရှင် အမိ အမိုက် တွေနဲ့ အတူ ” Morning ” ဆိုတဲ့ စာသား လေးနဲ့ ပုံတွေ ကိုတင်လာ ခဲ့တာပါ ။ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ခွေးလေး နဲ့ ရိုက်ထား တဲ့ မေပန်းချီ ရဲ့ ပုံလေး တွေကို ပရိသတ် ကြီး အတွက် ဝေမျှ ပေး လိုက်ပါ တယ် နော် ။
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ မေပန်းချီ က တော့ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တွေ နဲ့ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက် တဲ့ မျက်နှာ လေးကိုပိုင် ဆိုင်ထား တဲ့ သူမဟာ နာမည် ရ မင်းသမီး တွေထဲက တစ်လက် ဆို လည်း မမှားပါဘူး နော် ။ ဗီဒီယို တွေခေတ်စား ခဲ့တဲ့ ကာလ မှာ လည်း ပရိတ်သတ်တွေ တစ်ခဲ နက် အားပေး မှု ဝန်းရံ မှုတွေ ကို ရရှိ ခဲ့ တာပါ ။
သရုပ် ဆောင်ပိုင်း မှာ ဆိုရင် လည်း အပြစ်ပြော စရာ မရှိအောင် ဆေးစက် ကျရာ အရုပ်ထင် အောင် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် ပုံ ဖော် နိုင်သူတစ် ယောက် လည်းဖြ စ်ပါ တယ်နော် ။ အရမ်း မိုက်တဲ့ ကောက် ကြောင်း အလှတွေကို ပေါ်လွင်စေ တဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဖက်ရှင် မျိုး လေးတွေ ကို များသော အားဖြင့် ဝတ်တတ် တာ ကြောင့် ပုရိသ တွေ ရဲ့ အာရုံစိုက် အား ပေး မှုတွေကို ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယ် နော် … .
ဒီေန႔ မွာလည္း အမိုက္ စား ခႏၲာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွေတြ ေပၚလြင္ေန တဲ့ ဖက္ရွင္ အမိ အမိုက္ ေတြနဲ႔ အတူ ” Morning ” ဆိုတဲ့ စာသား ေလးနဲ႔ ပုံေတြ ကိုတင္လာ ခဲ့တာပါ ။ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ေခြးေလး နဲ႔ ႐ိုက္ထား တဲ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ႕ ပုံေလး ေတြကို ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္ ေဝမွ် ေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ ။
ပရိတ္သတ္ ႀကီးေရ ေမပန္းခ်ီ က ေတာ့ အမိုက္စား ခႏၲာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ေတြ နဲ႔ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္ တဲ့ မ်က္ႏွာ ေလးကိုပိုင္ ဆိုင္ထား တဲ့ သူမဟာ နာမည္ ရ မင္းသမီး ေတြထဲက တစ္လက္ ဆို လည္း မမွားပါဘူး ေနာ္ ။ ဗီဒီယို ေတြေခတ္စား ခဲ့တဲ့ ကာလ မွာ လည္း ပရိတ္သတ္ေတြ တစ္ခဲ နက္ အားေပး မႈ ဝန္းရံ မႈေတြ ကို ရရွိ ခဲ့ တာပါ ။
သ႐ုပ္ ေဆာင္ပိုင္း မွာ ဆိုရင္ လည္း အျပစ္ေျပာ စရာ မရွိေအာင္ ေဆးစက္ က်ရာ အ႐ုပ္ထင္ ေအာင္ အေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ ပုံ ေဖာ္ ႏိုင္သူတစ္ ေယာက္ လည္းျဖ စ္ပါ တယ္ေနာ္ ။ အရမ္း မိုက္တဲ့ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွေတြကို ေပၚလြင္ေစ တဲ့ ဆက္ဆီ က်က် ဖက္ရွင္ မ်ိဳး ေလးေတြ ကို မ်ားေသာ အားျဖင့္ ဝတ္တတ္ တာ ေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြ ရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္ အား ေပး မႈေတြကို ရရွိ ထားခဲ့ ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post တင်းကိတ်နေတဲ့ အလှတွေနဲ့ ဆက်ဆီ ကျလွန်းတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို
Next post ယောကျာ်းလေးတွေ ရဲ့ အကြောင်းကို စေ့စပ်သေချာစွာ သီချင်းလေးနဲ့ ပြောပြပြီး အသည်းယားစရာ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး